iyo yepamusoro-tier samsung galaxy tab s3 inowana rakakura $ 250 dhisikaundi pane amazon
Kuru Nhau & Ongororo Iyo yepamusoro-tier Samsung Galaxy Tab S3 inowana muhombe $ 250 dhisikaundi paAmazon
Samsung ichiri kutengesa iyo Galaxy Tab S3, yepamusoro-yekupedzisira piritsi iyo & apos; dzakaburitswa pamusika makore maviri apfuura. Kazhinji, unogona kubata imwe yakaderera se $ 550 kana iyo & apos isiri kutengeswa, asi iyo & apos; pamwe haisi chibvumirano chakanaka uchifunga kuti Samsung ine nyowani, mapiritsi ane simba anotengesa akatenderedza mutengo mumwe chete.
Nekudaro, kana iwe & apos; tikapa zvakare $ 250 dhisikaundi, iyo Galaxy Tab S3 kamwe kamwe inova inonakidza. Iyo piritsi inofambiswa neepamusoro-tier, kunyangwe yekare chipset, iyo Qualcomm Snapdragon 820 , pamwe ne4GB RAM uye 32GB yekuchengetera inochengetedzwa
Timu yeFoneArena iri kushanda nesimba kuti igare pamusoro peiyo Akanakisa Prime Day Kutengesa paAmazon, pamwe nemamwe madhiri ekutengesa. Tarisa chedu dhiri hub kazhinji kuti uone kuti ndeapi iwe & apos; ll like!
Iyo inomhanya Android 9.0 Pie, inova yapfuura iteration yeGoogle & apos; s mobile inoshanda sisitimu. Iyo Galaxy Tab S3 haigone kugamuchira imwe hombe Android OS yekuvandudza, asi iyo & apos; imwe yekukanganisa iwe kwaunofanirwa kuita kana iwe & apos; tichitenga yekare Android smartphone kana piritsi.
Zvimwe zvakakosha zveGlass Tab S3 inosanganisira Super AMOLED 9.7-inch inoratidzira, 13-megapixel kumashure-yakatarisana kamera, ina maspika stereo anofambiswa neAKG / HARMAN ruzha tekinoroji, uye isingabvisike 6,000 mAh bhatiri. Nenzira, isu tinotarisira zvimwe zvakanaka Samsung Amazon Prime Day inobata nekukurumidza, sezvo zuva guru rinoswedera, saka ramba wakarongedza!
iphone 11 pro max matipi
hapana spam firita pane renyeredzi s6
Screenshot inoratidza kuti iyo Moto Z Android 8.0 soak bvunzo iri kuenderera
Samsung Galaxy S5 mutengo uye zuva rekuburitsa
JBL Batanidza 10, 20, 300 smart matauriro Ongororo
Iyo LG Stylo 6 inodhura chete $ 120 paVerizon (mamiriro uye mamiriro anoshanda)